LISEA ANALAVORY Nosoloina ny provizera
Fivoaran’ny teknolojia eto Madagasikara Mila jeren’ny fitondrana akaiky, hoy ny manampahaizana
Efa tsy afaka mandeha irery intsony izao ny tontolon’ny informatika fa tsy maintsy miaraka amin’ny elektronika, io ilay antsoina hoe “informatique embarqué”, hoy ny manampahaizana momba izany, Solo Rakotondrianja.
Tanora manampahaizana Malagasy
“Tsy misy sehatra isokafany.” Tontosa tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny talata teo ny hetsika Pro Akademie 2019, izay fampihaonana ireo olona manana fahafahana mamatsy vola sy manana tetikasa.
Oniversiten`i Mahajanga Tafapetraka ny filoha vaovao
Tontosa ny fametrahana ny filohan`ny oniversiten`i Mahajanga ka Atoa Dinaraly Odilon Tiandaza no hisahana ny fitantanana ireo fakiolte roa sy toerana fampianarana ambony 4 ao Mahajanga.
Filohan’ny oniversiten’Antananarivo Vonona hiady sy hanafoana ny kolikoly
Tafapetraka tamim-pomba ofisialy omaly alakamisy 24 mey teny Ankatso ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo vaovao ny profesora Mamy Ravelomanana taorian’ny fifidianana natao.
CNaPS - DIDEC Moramanga Nahazo fiofanana ny mpampiasa sy ny mpiasa
Mitohy ny fanofanan’ny CNaPS sy ny DINEC ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly katolika ka nampahafantarina momba ny zon’ny mpiasa sy ny adidin’ny mpampiasa ny DIDEC Moramanga nandritra ny 4 andro.
Fivoaran’ny teny Anglisy Tsy maharaka ny mpampianatra Malagasy
Nanomboka omaly tetsy amin’ny CCI Ivato ny fiofanana izay karakarain’ny masoivoho sy ny departemanta Amerikanina misahana ny fampiroboroboana ny teny Anglisy an’i Afrika Atsinabana. Mpampianatra teny Anglisy miisa 381 avy amin’ireo faritra 23 manerana ny nosy no nanaraka izany.
ENI FIANARANTSOA Mpianatra 317 no notolorana diplaoma
Mitombo hatrany ireo tanora matihanina eo amin’ny sehatry ny informatika eto amintsika. Mpianatra 317 mianadahy indray no indray navoaka tao amin’ny ENI ( Ecole Nationale d’ informatique ao Fianarantsoa) ny faran’ny herinandro teo.
Nivaha tanteraka ny olana eo anivon’ny Lisea Analavory. Taorian’ny fitokonana notanterahin’ireo mpampianatra sy mpianatra ao amin’ity lisea iray ity, herinandro mahery lasa izay dia nalan’ny tompon’andraikitra tamin’ny toerany ilay provizera tao an-toerana ka ny lefiny no nakarina handray ny asany.
Niverina nianatra avokoa ireo mpianatra ny herinandro lasa teo. Mbola hetahetan’izy ireo hatrany ny tokony hanohizana ireo hetsika fitadiavam-bola sahaniny hahafahana manitatra ny fotodrafitrasan’ny sekoly. Anisan’ireny ny fananganana kianja filalaovam-baolina hahafahan’ireo mpianatra manao fanatanjahantena am-pilaminana. Toraka izany koa ny fanitarana ny sekoly hahafahana manampy ireo ray aman-dreny maniry ny mbola hampiana-janaka eo anivon’ity lisea iray ity. Mbola tokana ihany mantsy hatreto ny lisea ao Analavory nefa an’arivony ireo zana-bahoaka tokony hanovo fahalalana ao aminy. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo mba hifanome tanana aminy.